Ikhompiyutha ithinta kanjani impilo yomuntu?
Eminyakeni eyi-10-15 eyedlule, ikhompyutha iye yangena ngokuqinile empilweni yethu yansuku zonke. Noma yimuphi umsebenzi wehhovisi (ukubalwa kwezimali, abasebenzi, umsebenzi wehhovisi) ngaphandle kwekhompiyutha akunakwenzeka.
Futhi emva kokuba amakhompiyutha athathe amahhovisi, ukungena kwabo okungenakunqotshwa kwaqala futhi ekuphileni kwethu. Namuhla cishe wonke umndeni unomshini wekhompiyutha (okulula noma okunye okubizwa ngokuthi "isabelomali" kuya "kunqwaba" okwedlulele kakhulu - kuncike kwimali engenayo), ukusetshenziselwa imidlalo ngokumisela, ukulalela umculo nokubukela amabhayisikobho, ukukhuluma ku-intanethi ngezihlobo nabangane nakwezenhlalo amanethiwekhi (ekilasini, ukuphola, othintana naye, njll), ukubuka izindaba. Futhi abantu bomsebenzi wokudala (abalobi, izintatheli) sekuyisikhathi eside beyishintsha imishini yokubhala kumakhompyutha. Izinzuzo zekhompyutheni zicacile - akuvumela nje ukufaka ulwazi kuwo, kodwa futhi ukuyiqapha nokuyigcina ngobuningi obukhulu. Ikhompiyutha ihlangene nethuluzi lezisebenzi zehhovisi elinomsebenzi onamandla wokuzijabulisa. Kodwa uyazi ukuthi ikhompyutha ithinta kanjani impilo yomuntu?
Kodwa, njengoba sonke siyazi, akukho lutho oluhle, olunezinzuzo kuphela kanye nezinzuzo, futhi alutholakali ngokuphelele. Ngakho-ke, ikhompyutha, ngokuqinisekile, inezakhiwo ezingathandeki kithi. Ayini?
Ikhompiyutha ikhompyutha ye-electronic ehlanganisa uhlelo lwesistimu, isilondolozi, namadivayisi we-input-output information, e.g. idivaysi yamadivaysi kagesi adinga amandla okusebenza, ikakhulukazi, kagesi. Futhi noma yikuphi amandla, njengoba kuyaziwa, ngesikhathi sokusebenza kwanoma imuphi umshini awusetshenziswanga ngokugcwele, kanti ngokuyinxenye uguqulwa ube ezinye izinhlobo zamandla: ukushisa, imisebe.
Kuze kube sekupheleni kwekhulu leminyaka elidlule, i-computer ehlolisisa, njengamasethi wethelevishini, ngokuyinhloko yayine-tube ye-electron-beam tube, okuwumthombo we-ray ray ne-ray enamandla kagesi. Amakhomphyutha amaningi asetshenziswe ekhaya nasemsebenzini, futhi kuze kube sesikhathini samanje afakwe izihloli ezinjalo. Yiqiniso, imisebe ye-x-ray evela kumqapha ayidluli amazinga avumelekile, kodwa kungani sidinga imisebe eyengeziwe, ngoba kusekhona imvelo engokwemvelo yemisakazo yemvelo, i-fluorography, esibhekene nayo ngesikhathi sokuhlolwa kwezokwelapha, iTV evamile, njll. Okuyingozi kakhulu kunensimu ye-electromagnetic eyenziwe yi-computer, ivuselela umoya owuzungezayo, ongabangela ukukhathala, ukunciphisa ukuzivikela, ukuvimbela umsebenzi wokuzala nokuholela ezifweni zenhliziyo. Okuyingozi kakhulu imisebe evela eceleni nangemuva kokuqapha. Ama-crystal monitors abacwaningi bamanje abenzi ama-X ray kanye nezinga lemisebe yombane lapho kusebenza kakhulu. Umthelela omubi kakhulu wemisebe yombane ekukhuleni nasekuthuthukisweni kombungu, ngakho-ke kunomkhawulo omkhulu kakhulu kwabesifazane abakhulelwe, umsebenzi wabo ohlangene nekhompyutha. Ngesinqumo seDokotela oPhezulu wezoMnyango wezeMpilo waseRussia, kusungulwe ukuthi ngesikhathi sokukhulelwa abesifazane kufanele badluliselwe kwenye eminye imisebenzi, hhayi kuxhunywe nokusetshenziswa kwekhompyutha.
Yiqiniso, kubalulekile ukucabangela ukuthi amakhompiyutha aqhubeka ethuthukiswa hhayi kuphela ngokusheshisa nokwandisa emisebenzini eyenziwe, kodwa futhi ngokuqondene nezidingo zokuphepha nokuphepha kwempilo kumnikazi wayo. Futhi manje ikhompyutha yesimanje ivikelekile izikhathi eziyishumi kunezandulela zayo eminyakeni eyi-10-20 edlule. Ngakho-ke manje singakwazi ukukhuluma ngokuthi ikhompyutha izothinta kanjani impilo yabantu eminyakeni eyishumi nokuthi ngabe leli thonya lizohlala likhona yini.
Noma kunjalo, kunezici eziningana eziyingozi ezingaxhomeki ezishisayo, ezisebenza ngogesi kanye nezinye izimo ezivela emkhathini uma ikhompyutha isebenza. Indawo yokuqala emthelela omubi empilweni yomuntu kufanele ibekwe ithonya lekhompuyutha embonweni. Umuntu osebenza ngemuva kokuhlola i-computer umthwalo omkhulu emehlweni ngenxa yesidingo sokuhumusha okuvamile kwesikrini emaphepheni wekhibhodi namaphepha. Ngaphezu kwalokho, isithombe esikrinini sokuqapha asibonakali (okungukuthi, semvelo), kodwa sizenzele ngokuzenzakalelayo futhi sivuselelwe ngokugcwele, lapho idivayisi ebonakalayo ingashintshwa khona. Ngezinga eliphansi lokuvuselela, isithombe esithombeni sibukeka sibukeka, futhi senza umthwalo owengeziwe wamehlo. Ngakho-ke, uma usebenza nekhompyutheni, kufanele ulandele imithetho nemigomo yokuhlanzeka: njalo ngehora lomsebenzi, udinga ukuphumula amaminithi angu-10, lapho kufanele usebenzise umzimba ukuze uphumule futhi uthuthukise ukujikeleza kwegazi.
Kodwa, ngaphandle kokulimaza kombono, ukusebenza kwikhompyutha kuhlotshaniswa nenye into engalungile, equkethe ukuhlukumeza kwamanye amaqembu omzimba angenawo umthwalo kwenye imisipha, ukuphazamiseka kwegazi okubangelwa ukuhlala okungahleli lutho. Emuntwini osebenza njalo ekhomphyutha, isikhundla sokuhlala siholela ekudleni kwemisipha entanyeni nasekhanda, futhi kubangele ukucindezeleka okuphawulekayo emasipha nasemhlane. Imisipha yezandla kanye nemigqa yeminwe ihlale ikhululiwe, isebenza nekhibhodi, engabangela isifo samalunga namagundane. Ukusakazwa kwegazi engxenyeni engezansi yomzimba (imilenze, izitho zangasese) ziwohloka kakhulu. Imiphumela yokuhlala isikhathi eside endaweni engenalutho ngemva kwalokho kuphuma ama-osteochondroses ahlukahlukene kanye nokuvinjelwa komhlane. Ukungahambi kahle kwegazi esikhathini esiningi ukuphazamiseka kwegazi kudala ukuqhuma kwegazi ezingxenyeni zomzimba, okuyinto eyenza ukuvela nokuthuthukiswa kwezifo ezinjengama-hemorrhoids, i-prostatitis emadodeni, ukuhlukunyezwa kwezifo zesifo somzimba kubantu besifazane. Ukugwema inkinga enjalo kulula.
Kubonakala sengathi amakhompiyutha anamuhla anengozini empilweni enkulu kakhulu hhayi ngokwayo hhayi ngenxa yokukhishwa okungcolile noma ukudlidliza, kodwa okuningi kakhulu ngenxa yenhlangano engalungile yomsebenzi kuwo. Ukuqaphela indlela yokusebenza kwikhompyutheni kanye nokuphumula okuyimpoqo nokuzivocavoca kwamehlo ngeke kuvumeleke kuphela ukuqeda izici ezimbi zomsebenzi kukhompyutha, kodwa futhi kuzoqinisa impilo yakho.
Kulungile kanjani ukufunda ukugcina isabelomali somndeni?
Vala phezu kwefa ngezandla zakho
Egg yenkukhu: Umbuso
Isobho leVermicelli elinama-meatballs
Isaladi "Prefab" ngesigqoko sesinaphi
Izimbangela zephunga ezisuka emlonyeni nokuthi zingasuswa kanjani
I-Tarot Divination ngekusasa: indlela yokufunda ukuqagela amakhadi we-Tarot mahhala
Indlela yokwazi uhlamvu lwakho ngombala wezinwele zakho
Ukupheka kwezinkukhu ezimnandi nezomnandi emikhanda
Ukubuyiselwa kwamandla ngemva kokugula
Imilayezo emifushane ye-SMS evela kuFebhuwari 23
Ukusekelwa kwengqondo kwehlukaniso
Ukupheka pilova, ongazange ukwazi (9 zokupheka pilova)